Taariikhda Ururka gobanimodoonka Somaliyeed ee SYL (Warbixin+Cod+Sawiro) – SBC
Taariikhda Ururka gobanimodoonka Somaliyeed ee SYL (Warbixin+Cod+Sawiro)
Halkan ka dhageyso Warbixintan oo cod ah (Taariikhda SYL)
Qaybo ka mid ah warbixinta & sawirada waxaa iga siisay gacan: Safiyo Abuukar Karaani, & waliba warbixinta oo aan qaybo ka soo xigtey Xildhibaan Publications:
abdiwali (murleeye) says:
waxan aanka cod sanahaya bahda reer sbc aniga oo ah mawaadin reer puntland ah waxan aan ka codsanahayaa
wara bahintayda qiimaha leh
inay iisoo gudbiso
inta ka soo jeeda syl puntland
mursal abdi dahir says:
SBC hanbalyo saaxiibadayda shaqalaha ah, maamulka idacada iyo dadweynaha Soomaaliyeedba salaan diran iga gudooma waxaan dareensanahay inaad waligiin ka dalayn guubada iyo hilin xaasuusinta umada soomaaliyeed oo wakthiugaan baahiwayn u qabta.
abdiwali sxb adoo mahadsan waxaan ka xumahay inaad aragtida seegantahay,waxa la rabay inaad cibro iyo dareen ka qaadato rag 28 ugu wayn yahay oo soomaali ah, oo gumaysatahii wayna iyo kii yaraba kaguulaystay gumaystaha wayn anigu waxaan u aqaan qabyalada kanyarna reer yurubkii soo duulay. iyo sidii ay u halgameen. qabiilkooda hadii aad rabto waxaa ku abtirsadaan besha SYL.
Ahmed shirwac says:
Allaha uwada naxariisto dhamaantood guulaystayasha anagana Allaha nagaradsiiyo dowladnimada iyo xornimada .
wawa masha.alaah SBC Aad ayaan idinkaga Mahad calinayaa sida wanaagsan ee aad umadda usoo xusuusiyeen Tariikhda syl